Matetika ny vehivavy dia maniry ny manova kely ny alokaloky ny tady, manampy trondro volamena, saingy tsy misy izany na faniriana hamangy ilay salon. Misy fomba tsotra sy farafahakeliny, ahoana no ahafahana manamaivana ny volo - peroxyde ny hydrogène. Ity teknika ity dia manondro ny fisian'ny fitaovana manaparitaka fotsiny, fa tsy mitaky vola amin'ny fampiasam-bola sy fahaiza-manao manokana.
Peroxide ho an'ny volo
Voalohany, andeha hojerentsika hoe ohatrinona no azo ampiasaina.
Ny fanamafisana ny volo amin'ny peroxyde (hydrogen) dia noho ny fisian'ilay firaisana ara-pihetseham-po manimba ny pigment (melanine). Miaraka aminy, manjavona ny firafitry ny haavon'ny volo, dia manify kokoa, maina ary manify.
Noho izany, ny fomba fiheverana ny manova ny tonon-tombo-tsavoka dia tsy tena ilaina amin'ny fahasalamany, mety hitarika ho amin'ny fahaverezana, ny tsipaipaipaotin'ny torohevitra, ny fahasimban'ny endrika. Noho izany, dia tsy tokony hampiasaina ny peroxide, ary aorian'ny fikarakarana, dia omeo antoka ny fiarovana ny volo, ny sakafo mahavelona ary ny fivoahana tanteraka.
Ahoana no hanamaivanana ny volo amin'ny peroxide?
Misy fomba roa ahafahana manova ny loko volom-borona amin'ny alalan'ny voambolana voafaritra, fa alohan'ny fomba fanao dia tsara ny mitadidy fitsipika vitsivitsy:
Mba hanasana ny lohanao, dia ampiasao shampoo maivana avy amin'ny voajanahary voajanahary.
Mividy masom-boly na mamono na mamolavola azy ireo.
Ampitahao ny famenoana kofehy vita amin'ny volon'ny volo ary alaharo amin'ny vy.
Raha manaraka ireo torohevitra ireo ianao, dia afaka misoroka ny fahasimbana mafy amin'ny rafitr'ireo fitongilanana ary mitahiry ny hatsaran-tarehiny.
Ity no fomba handotoana ny volo amin'ny peroxide mandeha amin'ny rano:
Sasao tsara ny lohanao ary sasao amin'ny lamba famaohana, ataovy tsara.
Zarao hozaraina maromaro ny tadiny ary afafazo amin'ny valizy.
Ahazo ny peroxydehy ao anaty rano miaraka amin'ny 3% ao anaty fitoeran-kitapo madio miaraka amin'ny mpamono vaky. Raha volo sy malefaka ny volom-bolo na tokony hohamaivanina kely, dia azonao atao ny manomana ny vahaolana amin'ny rano sy ny peroxide amin'ny mitovy aminy.
Ho an'ny fizarana tsirairay amin'ny volo eo amin'ny sehatra voaomana, dia manaparitaka ny vovo-drivotra ary manosotra azy amin'ny famolahana matetika.
Avelao hivezivezy ny peroxide ao anaty rano. Ny faharetany dia miankina amin'ny aloky ny faniriana ary mety haharitra 30 ka hatramin'ny 60 minitra. Azonao atao ny mampitombo ny vokatra raha manasanao ny volonao amin'ny fofona iray.
Atsofohy amin'ny loharano mafana ny lohanao, ary ampanaovy volom-bilia na fefy. Amporisihina izy ireo hampiasaina isaky ny mandeha araka ny fizotran'ny rano.
Raha toa ka tsy azonao atao ny manamaivana ny fantsona mankany amin'ny toerana tianao, dia afaka averinao indray ilay fivoriana ao anatin'ny 2-3 andro.
Ny fomba faharoa amin'ny fampiasana peroxide dia mety raha mila manova ny alokaloky ny tadiny sasany na ny fizarana volo. Amin'ity tranga ity dia mila mampihatra ny votoaty amin'ny endriny madio mankany amin'ireo faritra voafantina ianao ary mamatotra ny volon'ny volo amin'ny foil. Rehefa afaka 30-45 minitra, afaka manasa ny volonao ianao.
Moa ve ny peroxide mandeha amin'ny rano no manazava ny volo mainty?
Ny fomba fanolorana fanitsiana ny tadin'ny lamandy dia mety kokoa ho an'ireo vehivavy manana loko na hatsarana. Ny Brunettes dia atahorana Manàna vokatra tsy azo tsapain-tanana amin'ny endriky ny mena-ravina, satria ny vatana simika voafaritra indray mandeha dia tsy afaka manimba tanteraka ny melanin ao amin'ny tehina.
Na izany aza, azonao atao ny manamaivana na dia volo mainty miaraka amin'ny peroxide 3% ao anaty rano aza, raha tsy izany dia mitaky ny hamerenana io dingana io 2-4 inefatra. Ny fotoana ifantohana dia tokony ho ny fara-tampony (1 ora), ary ny halaviran'ny halatra dia tokony 1-2 andro.
Aorian'ny fanamafisana, dia zava-dehibe ny hahazoana antoka fa ny hoditra sy ny fitongilan-tena dia voakarakara tsara mba tsy hiseho ny pesta ary tsy manomboka mihintsy ny tady.
Akanjo ho an'ny volo amin'ny yogourt sy ny atody
Dipoavatra avy amin'ny volo
Bob-kara miaraka amin'ny fihenanam-bolo - 24 venty ny akanjo modely ho an'ny volo fohy sy midina
Hairstyle ho an'ny volo midadasika
Voasary haingana ny hairaha
Horonam-boky tena izy
Volo poloney ao an-trano
Voanjo miaraka amin'ny voninkazo amin'ny volony
Jennifer Aniston dia nahagaga ny mpanatrika tamin'ny fihetsiny tamin'ny Oscar-2017
Adihevitra 10 goavana no namidy ho an'ny pittance
Nahoana no manana ravina mavo ny sambokely?
Kiraro mafana 2013
Ny fanafody Actovegin - mari-pamantarana ampiasaina
Laparoskopy noho ny tsy fahampian-tsakafo
Mark Zuckerberg no ho ray fanindroany